Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub ee EPL, Serie A, La Liga, Bundesliga iyo Ligue 1 - Hilaac News
Home Sports Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono shanta horyaal ee...
(Yurub) 09 Nof 2019. Kulammo dhowr ah oo ka tirsan shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, iyadoo ay ku jiraan ciyaaro xiiso leh.
Aan ku horreyno horyaalka Premier League Ingiriiska, waxaa kulammada ugu waa weyn ka mid ah kuwa ciyaari doonaan kooxaha Chelsea vs Crystal Palace iyo Leicester City vs Arsenal.
Chelsea ayaa kula ugu adag horyaalka Premier League galabta 3:30 Galabnimo soo dhoweynaysa Crystal Palace, si la mid ah, Kooxda Arsenal oo u safreysa Leicester City.
Dhinaca kale horyaalka La Ligaha Spain haddii aynu eegno waxaa maanta iyo caawa laga ciyaarayaa kulamo dhowr ah, waxaana ka mid ah kulanka ay Real Madrid ay booqanayso Eibar 8:30 Habeennimo iyo kulanka ay Barcelona soo dhoweynayso naadiga Celta Vigo 11:00 Habeennimo.
Horyaalka Serie A haddii aynu eegnana kulanka ugu weyn waxa uu caawa dhexmaray doonaa 8:00 habeennimo kooxaha Inter Milan iyo Verona.
Dhinaca kale waxaa la dheeli doona kulamo ka tirsan horyaalka Bundesliga waxaa kulanka ugu adag uu yahay kan dhexmari doona kooxaha waa weyn ee FC Bayern München iyo Borussia Dortmund 8:30 Habeennimo.
Horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska haddii aynu eegnana kulamo dhowr ah ayaa la ciyaarayaa waxaana laga xusi karaa kulanka Paris Saint-Germain ay booqanayso Naadiga Brest caawa 7:30 Habeennimo.
3:30 Galabnimo Chelsea vs Crystal Palace
6:00 Maqribnimo Burnley vs West Ham United
6:00 Maqribnimo Newcastle United vs AFC Bournemouth
6:00 Maqribnimo Southampton vs Everton
6:00 Maqribnimo Tottenham Hotspur vs Sheffield United
8:30 Habeennimo Leicester City vs Arsenal
3:00 Galabnimo Deportivo Alaves vs Real Valladolid
6:00 Maqribnimo Valencia vs Granada
8:30 Habeennimo Eibar vs Real Madrid
11:00 Habeennimo Barcelona vs Celta Vigo
5:00 Galabnnimo Brescia vs Torino
8:00 Habeennimo Inter vs Verona
10:45 Habeennimo Napoli vs Genoa
5:30 Galabnimo Mainz 05 vs FC Union Berlin
5:30 Galabnimo Schalke 04 vs Fortuna Düsseldorf
5:30 Galabnimo Hertha BSC vs RasenBallsport Leipzig
5:30 Galabnimo SC Paderborn 07 vs Augsburg
8:30 Habeennimo FC Bayern München vs Borussia Dortmund
7:30 Fiidnimo Brest vs Paris Saint-Germain
10:00 Habeennimo Monaco vs Dijon
10:00 Habeennimo Lille vs Metz
10:00 Habeennimo Strasbourg vs Nimes
10:00 Habeennimo Reims vs Angers
Previous articleHorudhac: Celta Vigo vs Barcelona… (Barca oo rajaynaysa inay ka soo kabato natiijooyinkeedii xumaa ee ugu dambeeyey)
Next articleSaddexda Tababare ee la la xiriirinayo Kooxda Barcelona kuwaasoo badal u noqon kara Macallin Valverde oo la shaaciyey
Gingrich: Giuliani is doing substantial damage to Biden's candidacy
NBC Universal still planning to release 'The Hunt' despite backlash
Justine Greening reveals she was expelled by the Tories by voicemail
RASMI: Bayern Munich oo ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Ivan...
Unai Emery oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lucas Torreira inuu...
Tababare Valverde oo shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee uu kala qeyb-geli...